Barnaamijka Mas'uuliyadda Bulshada ee WoopShop
Barnaamijkeena Mas’uuliyada Bulsho
Si looga dhigo iyaga inay dhoola cadeynayaan ..
Waxaa jira waxyaabo badan oo laga helo in ganacsi la guuleysto laga dhigo kaliya in si fudud macaash loo sameeyo. Waxay kaloo ku saabsan tahay sameynta aragti dhab ah iyo ku yeelashada saameyn wanaagsan bulshada dhexdeeda.
Hogaamiye ahaan ganacsiga E-commerce, waxaan sidoo kale nahay shirkad mas'uul ah oo ka shaqeysa xaqiijinta in dukaamaysiga internetka uu u horseedo horumar waara iyo bulsho bulsho wadamada Afrika.
Waxaan xoojinay ballanqaadkan shaqaalahayaga, macaamiisheenna, iyo la-hawlgalayaashayada. Markaa waxaan u dejinay boqolkiiba faa'iidooyinka barnaamijkan sadaqada ah waxaanan siinnay fursad ay macaamiisheennu kaga qaybgalaan barnaamijkan iyagoo ku deeqaya bogga wax lagu iibsado.
Dakhligan waxaa lagu bixin doonaa Afrika:
Taageer waxbarashada iyo ciribtirka akhris-qoris la'aanta.
Ku tabaruca ciribtirka saboolnimada ba'an iyo gaajada.
Taageerida waaxda caafimaadka iyadoo la yareynayo dhimashada carruurta & cudurada la dagaallama.
Xor ayaad u tahay inaad wax ku biiriso oo aad kaqeybqaadato gaarista hadafyadan sharafta leh adoo ku deeqaya lacag bixinta.